पुर्व सचिव उपाध्यायको शान्ता चौधरीलाई प्रश्न : आफ्नो उद्धार गर्ने नेताको सांसद पद खान चोर औंला देखाउने ? « रिपोर्टर्स नेपाल
पुर्व सचिव उपाध्यायको शान्ता चौधरीलाई प्रश्न : आफ्नो उद्धार गर्ने नेताको सांसद पद खान चोर औंला देखाउने ?
काठमाडौं, ५ भदौ । नेपाल सरकार पुर्वसचिव भीम उपाध्यायले नेकपा एमालेकी सांसद शान्ता चौधरीलाई आफ्नो उद्धारगर्ने नेताको सांसद खारेज गर भन्दै चोर औंला देखाउने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो प्रश्न गरेका हुन ।
पुर्वसचिव उपाध्याय र सांसद चौधरीबीच यही विषयमा सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको माधब कुमार नेपाल र शान्ता चौधरीको एक तस्विर फेसबुकमा हाल्दै पूर्व सचिब भिम उपाध्यायले १७ वर्ष जमिन्दारको घरमा बिना तलब काम गरेकी कमलहरीलाई टिपेर माधब नेपालले सांसद बनाएको तर अहिले उनैको बिरुद्धमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
उनी लेख्छन्,“आफ्नै उद्धारकर्ताको पद आज खोस भन्दै उदण्डता गर्ने पूर्वकमलहरी शान्ता चौधरीलाई टपक्क टिपेर समानुपातिक सांसद बनाइ सिहदरबार छिराएका हुन् । हिजो यी सांसद शान्ता चौधरी माधव नेपालको सांसद पद खारेज गरिहाल भन्दै सभामुखको कार्यकक्षमा चोर औला देखाउदै धर्ना दिने अग्रपंक्तिमा थिइन् । आजसम्म सोच परिवर्तन भएनछ” ।
यसको जवाफमा नेकपा एमालेकी सांसद शान्ता चौधरीले एउटा कमलहरी सधैं कमलहरि नै हुनु पर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । उनी लेख्छिन्,“एउटा कमलहरी देशको कानुन बनाउन आएको तपाईँजस्तो मान्छेले कँहा पचाउन सक्नुहुन्छ र त्यो कुरा राम्रोसँग बुझेको छु” । साथै, सांसद चौधरीले आफुलाई माधब नेपालले एमालेमा ल्याएको स्विकायर्दै ‘नेता नेपालले ल्याएकै ठाउँमा आफु बसेको, तर उनको पछिपछि जान नसक्ने’ बताएकी छिन् । त्यसैगरी उनले यो तस्विर कमैयाहरुको आन्दोलनको भएको स्पष्ट पार्दै माधब नेपालले मुक्त गरेको नभएको बताएकी छिन् ।
यसको प्रतिउत्तरमा पुर्वसचिब उपाध्यायले आफुले कसैको विचार फेर्न नभइ व्यवहारको चर्चा गरेको बताएका छन् । उनी लेख्छन्,“राजनीति जुन दलमा बसेपनि सौम्य, शालिन र अनुकरणीय होस् । कसैलाई थर्काउने, हुलहुज्जत गर्नेले जागिर खानुपर्छ, नेता बन्न सकिन्न । कुनै एउटाको पुच्छर बने ठिक हुदैन, कसैको पनि पुच्छर बन्न हुदैन । तर मलाई मतलब भएन, मेरा जनप्रतिनिधि तगडा हुन्, स्वतन्त्र र विवेकी हुन्, कसैको दास नहुन् भन्ने मेरो झिनो आशा हो जो पूरा हुदैन । तपाईँमाथि गौरव थियो तर यसमा अहिले खिया लाग्यो । तपाईंकै प्रतिक्रियाले यसमा झन् पुष्ट्यायो । टिक्नुहोला आफ्नो अडानमा, हामी पर्खने छौ” ।